August 2021 - Page2of6- 7DAY THADIN
မူရင္းတင္တဲ့ ပို႔ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေျပာတဲ့ ကိုယ္ေတြ႕အာလူးသီး
August 26, 2021 August 26, 2021 - by admin
မူရင်းတင်တဲ့ ပို့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ ကိုယ်တွေ့အာလူးသီး အမဲစက်​ မှှဲ့​ခြောက်​ ​နေ​လောင်​ကွက်​ သက်​သာ​ပျောက်​ကင်​းတဲ့နည်​း​လေး လက်​​တွေ့စမ်​းသပ်​ကာလ ၂ပတ်​အတွင်​း အ​တော်​သက်​သာလို့ မျှ​ဝေ​ပေးလိုက်​ပါသည်​။ အားလူးကို သနပ်​ခါး​သွေးသလို​သွေးပြီး…မျက်​နှာသစ်​ပြီးလိမ်​းပါ။တ​စောငး်​လက်​ပတ်​ရှိကထည်​့​သွေးပါ။ မရှိလဲ အာလူးနဲ့​ရေနဲ့​သွေးလိမ်းပါ။ခြောက်​မှ မျက်​နှာထပ်​သစ်​ပြီ cream. တခုခုလိမ်​း​ပေးပါ။ လက်​​တွေ့စမ်​းသပ်​ပြီးမှ ဒီပို့စ်​ကိုတင်​လိုက်​ပါသည်​။အလွယ်​ကူဆုံးနည်​း​လေးပါ။အမဲစက်များတဖြည်​းဖြည်​းပါလာပြီး ပန်​း​ရောင်​အ​နေထားသို့​ရောက်​ရှိလာပါလိမ်​့မည်​.ဆက်​လိမ်​း​ပေးပါ။ ​ သွေးပြီးရင်​​ကျောက်​ပြင်​​ပေါ် ပုံအပါအတိုင်​း​မှောက်​ထားပါ။ မဲမသွားရန်​။ ​ကျောက်​ပြင်​သီးသန်​့မထားနိုင်​ပါက ​ကြွေပန်​းပြား​လေးထဲ​မှောက်​ထား​ပေးပါ။ တညလုံးလိမ်​းမအိပ်​ပါနှင်​့ တင်​းလွန်​းလျှင်​ မျက်​နှာအသားနုသည်​့အတွက်​ …
သင့္အိမ္မွာရွင္သီဝလိဆင္းတုေတာ္ရွိလွ်င္ သိထားသင့္တဲ့ ေလာကီပညာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အသုံးျပဳနည္းမ်ား
သင့်အိမ်မှာရှင်သီဝလိဆင်းတုတော်ရှိလျှင် သိထားသင့်တဲ့ လောကီပညာ လျှို့ဝှက်ချက်များ သင့်အိမ်ရှိ ရှင်သီဝလိဆင်းတုတော်၏ လောကီပညာလျှို့ဝှက်ချက်နှင့် အသုံးပြုနည်း(1) ဒီတခါမှာတော့ နေအိမ်တိုင်းမှာ ကိုယ်စီကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ထားတဲ့ အရှင်သီဝလိဆင်းတုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လောကီပညာလျှို့ဝှက်ချက်ထဲကမှယတြာအစီအရင်ပိုင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လောကီပညာ တြိမဏ္ဍလအတတ်ရဲ့ဟိတ်ပညာပိုင်းနဲ့ဓာတ်ပညာအပိုင်းမှာ အဓိကစီရင်ထုံးကပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ စီရင်နည်းမှာ သင့်မှာအကြတ်အတည်းနဲ့စိတ်ညစ်စရာများတဲ့အခါမှာ အရှင်သီဝလိရုပ်ပွားတော်ထံတွင် စနေနေ့ ည930 မှာ အလင်းတိုင်အဝါနှစ်တိုင်ပူး၊ကြက်လျှာအနီဆယ်လက်ပူဇော်ပါ။ အညံအဆိုးများစိတ်ညစ်ခြင်းများပပျော်သွားပါမယ်။ရောင်းပန်သာ၍ဝယ်ပန်းလှပြီးဝင်ငွေစီးပွားတိုးတက်လိုတဲ့အခါ. သောကြာနေ့ မနက်စောစော မှာအရှင်သီဝလိကိုယ်တော်ကို …
ေဒၚလာ ၂၀ ေပးၿပီး ညစ္ပတ္ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ဆိုဖာကို ဝယ္ခဲ့ရေပမဲ့ ႀကီးမားတဲ့ထီ ေပါက္သလို ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ အခန္းေဖာ္သုံးဦး
ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးပြီး ညစ်ပတ်ဟောင်းနွမ်းတဲ့ဆိုဖာကို ဝယ်ခဲ့ရပေမဲ့ ကြီးမားတဲ့ထီ ပေါက်သလို ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အခန်းဖော်သုံးဦး အခန်းဖော်သုံးဦးက သူတို့ရဲ့ ဒေသ Salvation Army သို့ သူတို့က ဒေါ်လာ ၂၀ ဖြင့် ဆိုဖာဝယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ ဒေါ်လာ ၄၀,၀၀၀ ပမာဏ များနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ရတနာသိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ လူမှုရေးဝန်ထမ်း Cally Guasti …
ဦးကျော်သူလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အနုပ ညာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာရော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဘာမှ အပြစ် ပြောရက်စရာ မရှိလောက်အောင် အရာရာပည့်စုံကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဦးကျော်သူနဲ့ ပက်သက်ပြီး လူသိပ်မသိသေးတဲ့ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုလည်း မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှ ယခုလို ပြောပြထားပါတယ်။ ဒွိဟဖြစ်မိပါရဲ့ (ပရဟိတဘုရင်ကြီး အလွမ်းပြေ) ကိုရီးယားမှာ ပေါ့ဗျာ။ အကယ်ဒမီ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဖြစ်တယ်လို့ကိုရီးယားလို …
မကြၽတ္လြတ္ေသးတဲ့ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ရဲ႕ဝိဉာဥ္နဲ႔ လက္ထပ္လိုက္ၿပီဟု ဖြင့္ခ်ေျပာျပလာခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသမီး
ကမ္ဘာကျော်ပေါ့ပ်ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၂)နှစ်လောက်က ဆုံးပါးခဲ့ပြီး တကမ္ဘာလုံးရှိကမ္ဘာကျော်ပေါ့ပ်ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၂)နှစ်လောက်က ဆုံးပါးခဲ့ပြီး တကမ္ဘာလုံးရှိ ပရိသတ်တွေဟာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ နှမြောမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြရပြီး ယနေ့အချိန်ထိ မမေ့နိုင်ဖြစ်နေကြဆဲပါ။အခုအခါမှာတော့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဟာ သူမအနေနဲ့ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ ဝိဉာဉ်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးဟာ အများရယ်စရာဆိုပေမယ့်- ယခင့်ယခင်ကလည်း မကျွတ်လွတ်တဲ့ ဝိဉာဉ်တွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့သူတွေ …
ေျခလက္မ်ားမပါဘဲ ေမြးဖြားလာတယ္ဆိုေပမဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ မိတ္ကပ္ပညာရွင္တစ္ဦး
လက်များနဲ့ ခြေများမပြည့်ဆုံပေမဲ့ အသက် ၂၂နှစ်အရွယ် မိတ်ကပ်ပညာရှင် Gabe Adams က TikTok နာမည်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပြီး သူဟာ သာမန်လူတွေထက် ဘာမဆိုလုပ်နိုင်တဲ့ သူပါ ။ “Gabe Adams” ကို ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ Sao Paulo မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ခြေလက်များမပါဘဲ မွေးဖွားလာခဲ့တာပါ ။ Hanhart Syndrome …
ပန္းရံဆရာလင္မယား ကင္းလိပ္ေခ်ာအျမႇီးႏွစ္ခြကို ၂လ ၃လအၾကာ ေမြးထားလိုက္မိေသာအခါ
August 21, 2021 August 21, 2021 - by admin
ကင်းလိပ်ချောအမြှီးနှစ်ခွကို ၂ လ ၃ လအကြာမွေးထားတဲ့နောက်မှာ သူ့ရဲ့ပန်းရံအလုပ်တွေဆက်တိုက်ဝင်လာနေသလို ဇနီးဖြစ်သူကလည်း ၂ ပတ်ဆက်တိုက်ထီကံထူး အကျိုးပေးတဲ့ ကင်းလိပ်ချောအမြှီးနှစ်ခွ ဘတ် ၂ သိန်းဈေးပေါက် အကျိုးပေးကင်းလိပ်ချောတစ်ကောင်ကို ၂လ ၃လကြာမွေးထားတဲ့ ဖစ်ချဘွန်ခရိုင်က ပန်းရံဆရာ အလုပ်ကောင်း ဇနီးဖြစ်သူထီကံထူး ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဖစ်ချဘွန်ခရိုင်မှာနေထိုင်တဲ့ ပန်းရံဆရာတယောက်ဟာ ကင်းလိပ်ချောအမြှီးနှစ်ခွတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့ ဖမ်းယူပြီး သူ့ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားခဲ့ပါတယ်။ ကင်းလိပ်ချောအမြှီးနှစ်ခွကို၂ လ ၃ …
ေျမးမေလးရဲ႕အထူးေန႔ေလးကို မဖ်က္ဆီးေစလိုတာေၾကာင့္ အိမ္ျပင္ထြက္ကာ တိတ္ဆိတ္စြာ ငိုေႂကြးေနခဲ့တဲ့ အသက္ ၉၀ အ႐ြယ္အဘြားတစ္ဦး
August 20, 2021 August 20, 2021 - by admin
လက်ထပ်ပြီးနောက် မိသားစုရှိလာတော့မဲ့မြေးလေးတွေကို မြင်တွေ့ရခြင်းက အဘိုးအဘွားအများစုအတွက် ပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်း ၎င်းက မြေးလေးတွေကို အရင်လို တွေ့ချင်သလိုမတွေ့နိုင်တော့တာကြောင့် အဘိုးအဘွားများရဲ့နှလုံးသားကို ကြေကွဲစေပါတယ်။ ခုလည်း အဘွားဖြစ်သူတစ်ဦးက သူမရဲ့မြေးမလေးအိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါ သူမရဲ့မျက်ရည်များကို သုတ်ဖို့ အိမ်အပြင်ဘက်ကို ထွက်လာခဲ့ပုံကို ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးမိခဲ့ပြီး “ အသက် ၉၀ အရွယ်အဘွားက သူ့မြေးမလေးလက်ထပ်တဲ့နေ့မှာ သူမရဲ့မျက်ရည်တွေကို အိမ်ကလူတွေမသိအောင် အိမ်ပြင်ဘက်မှာ တိတ်ဆိတ်စွာ စီးကျစေခဲ့တယ်” …
က်ေနာ့္သမီးေလး ေဆး႐ုံတင္ထားရတာမလို႔ ခိုးမိတာပါဆိုၿပီး
August 19, 2021 August 19, 2021 - by admin
သမီးလေး ဆေးရုံတင်ထားရတာမလို့ ခိုးမိတာပါ မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာတဲ့ လက်အုပ်ကလေးချီပြီး ငိုယိုတောင်းပန်စကား ဆိုခဲ့တဲ့ ဖခင်တစ်ဦး သမီးလေးဆေးရုံ တင်ထားရတာမို့ခိုးမိတာပါဗျာ ကျနော်သူခိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကျနော့်ကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာတဲ့ လက်အုပ်ကလေးချီပြီး ငိုယိုတောင်းပန်စကားဆိုတဲ့ ဖခင်တစ်ဦးရဲ့မေတ္တာ ဆိုင်ကယ်သူခိုးမိလို့ ပြေးကြည့်မိတာ ကြားလိုက်ရတဲ့အသံက တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဆိုင်ကယ်သူခိုးမိတယ်လို့ ပြောနေအော်နေကြလို့ ပြေးကြည့်မိတာ ကြားလိုက်ရတဲ့အသံက တကိုယ်လုံးတုန်ပြီး ငယ်သံပါအောင် လက်အုပ်လေးချီအော်နေတာ။ img src=”https://fouryoumm.com/wp-content/uploads/2021/05/fouryou1.jpg” alt=”” width=”1200″ …
တာလီဘန္ေတြက ႏွာေခါင္းနဲ႔ နား႐ြက္ျဖတ္ၿပီး ေတာင္ေပၚမွာ ပစ္ထားခဲ့ၾကေပမယ့္ အသက္မေသပဲ ကမာၻေက်ာ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး
အာဖဂန်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့ ဝေးရာကိုထွက်ပြေးတာကြောင့် နှာခေါင်းနဲ့ နားရွက်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူမနာမည်ကတော့ Aesha Mohammadzai ပဲဖြစ်ပြီး Bibi Aisha လို့လည်း သိကြပါတယ်။ သူမဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်အလယ်ပိုင်းရှိ တောင်တန်းများမှာ တာလီဘန်သားသတ်သမားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ခုလိုနှာ‌ခေါင်းနဲ့ နားရွက် အဖြတ်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံမှာ သူမအသက် ၁၂ နှစ်တွင် မိသားစုအကြွေးကို ဖြေရှင်းရန် တာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ဦးနဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်ခံခဲ့ရပြီး …